I-PES eFootball 2020, uhlaziyo oluhle kakhulu kuye | Iindaba zeGajethi
I-PES eFootball 2020, ukulungiswa okube kuhle kakhulu
Ixesha elitsha kunye nomdlalo omtsha webhola ekhatywayo, ngeli xesha sele kungaphezulu kokuthelekiswa phakathi kweFIFA nePES, phakathi koBugcisa be-Elektroniki kunye neKonami. Sine-eFootball PES 2020, eyona nguqulelo inesibindi eyakhutshwa nguKonami kwi-PES yasentsomini kwaye siyayihlalutya ukuze ukhethe ngoku ukuba yomibini le midlalo ikwiimarike, ngaba kufanelekile? Sichithe iiyure ezimbalwa kwi "Pro" entsha uKonami asebenze kuyo kwaye sifumene uthotho lwezinto eziphuculweyo ezibonakalayo kuwo onke amanqanaba, kwaye kunjalo amanye amanqaku abuthathaka asekhona ngaphandle kwayo yonke into.
1 Yintoni enye etshintshileyo kuleFootball PES 2020 entsha
2 Amanye amanqaku amabi aseleyo
3 Iilayisensi ze-EFootball PES 2020
4 I-Master League entsha kunye nehlaziyiweyo kunye nokudityaniswa
5 Ukubheja okucacileyo ngekamva
Yintoni enye etshintshileyo kuleFootball PES 2020 entsha
Into yokuqala, njengoko ubonile, ligama. Umdlalo webhola ekhatywayo we-Pro Evolution webhola ekhatywayo ubizwa ngokuba yi-eFootball PES 2020, ukunqwala kumaJapan malunga noko inkampani leyo izimisele ukukwenza ngomdlalo, ukuwenza ube ngumsebenzi wobugcisa kwaye ugxininise ukuba iKonami isebenza ngokuchanekileyo ekwenzeni umdlalo webhola ekhatywayo, hayi enye ibhola ekhatywayo umdlalo. Ngokubanzi, kwinqanaba lamaqhinga, ubuchule kunye nendalo yomdlalo, batshintshe kancinci kangangoko, nangona kunjalo, Sifumana uguquko oluninzi ngokudibanisa nemfuno.
Utshintsho lokuqala lubonakala ekuphathweni kwebhola kunye neentshukumo esizenzayo ngaphandle kwayo, kule meko ukulungiswa kweqela lethu (ngakumbi kwimowudi ye-MyClub) kunye nokulungiswa kwemigca kungaphawula ngaphambi nasemva komdlalo ngamnye. Ukuchaneka kuya kubaluleka ngakumbi kunangaphambili, kunye nenyani yokuhamba phambili komdlalo, ngakumbi kukhuselo apho i-CPU ingazukuthatha izintso ngokucacileyo kwaye kuyakufuneka sidanise phakathi koxinzelelo oluncedisiweyo (ukucofa isikwere) kunye nesixinisi esingasemva, ukuze singazivezi izithuba ezigqithileyo ezinokuchaswa ngumbangi ngohlobo lokudlula okunzulu.
Amanye amanqaku amabi aseleyo
Ibhola ekhatywayo i-PES 2020 ihlaziye kancinci ukuphendula koonozinti, ngakumbi kwinqanaba lokuzolula. Nangona kunjalo, basenengxaki yokuphendula ngokunzulu, musa ukuyihlasela ngenkuthalo ibhola kumntu ngamnye kwaye ngamanye amaxesha ushiye igumbi elininzi kakhulu kumhlaba wokukora. Nangona kunjalo, oonozinti akulula ukubothusa kwiimeko zemihla ngemihla, ezinje ngezithende zesithende okanye ngaphandle kwendawo, kuba oku kuyakufuneka sisebenzise ukwazisa ngokusesikweni (ukubamba i-R2) eya kuthi ibenomdla omkhulu kwicala, kodwa iyabulala ukuba siyifumene kakuhle.
Amaqhinga, Nangona kunjalo, zihlala zibanzi kwaye zinzulu. Yenza ngokwezifiso kakhulu, nangona kubiza imali encinci ukubabamba ukuba awuhlali rhoqo kwi-franchise, kodwa kungekudala uyakuqonda ukuba inokuba ngumahluko phakathi kokhuselo oluyintlekele okanye ibhlokhi ebumbeneyo. Iqhinga lidlala indima enkulu kwibhola ekhatywayo yokwenyani, kwaye i-eFootball PES 2020 ijonge ukuba yiyo kanye. Asinakulifumana njengendawo engalunganga, mEndaweni yoko, yinkalo ekholisa ukoyikisa abadlali "abaqhelekileyo" ngakumbi kwimowudi ye-MyClub okanye xa sikhetha ukudlala ngendlela "ekumgangatho" kunye namaqela emveli.
Iilayisensi ze-EFootball PES 2020
Amaphepha-mvume yimfazwe engunaphakade, kulo nyaka i-eFotball PES ayizukuba neChampions League, endaweni yoko ithathe amalungelo e- I-Euro 2020, Kwinqanaba leqela lesizwe, umdlalo uza kuhlaziywa xa kuphela ixesha lokuziqhelanisa neemfuno zeskripthi sokhuphiswano lwezi mpawu. Ezi ziilayisenisi zeqela le-eFootball PES 2020:
I-Euro 2020: yasimahla kwaye ikhethekileyo i-DLC
IBoca Juniors kunye ne-River Plate ngokukodwa, kunye neenkundla zabo
ISerie A eneJuventus kuphela
INkulumbuso yaseLadbrokes yeNkulumbuso
Inzala evela eHolland
IPortugal NOS League
I-RSL evela eSwitzerland
SporToto evela eTurkey
Iquilmes yaseArgentina yeSuper League
Ubuntshatsheli be-AFP yaseChile
IJupiter Por League yaseBelgium
I-Super League yaseTshayina
IToyota Thau League yaseThailand
Kwakhona, I-EFootball PES 2020 iya kulawula, phakathi kwabanye, iCamp Nou, Allianz Arena kunye neJuventus Stadium, amabala emidlalo angazukubakho kwiFIFA 20 eyimbangi, ethi ithathe iiligi ezibalulekileyo ezinjengePremier League, iSantander League okanye ilayisensi yeChampions League. I-duel yamaphepha-mvume inokuconjululwa ngokulula kwiifayile zoKhetho zakudala kwaye uhlele imo ekhoyo kwi-eFootball PES 2020.
I-Master League entsha kunye nehlaziyiweyo kunye nokudityaniswa
Ngoku sithetha ngemowudi yemidlalo ye-PES yemveli kunye nesisithathe iiyure ezininzi xa bekungekho ndlela ye-intanethi, abanye bethu bebedlala imidlalo yevidiyo kangangexesha elithile (ikwafumaneka kwiPC). Ngoku sinokukhetha iintsomi njengomqeqeshi, NjengoJ. Cruiff okanye uMaradona, onobume be-cinema ethile kwaye ofana kakhulu neMowudi yoKhathalelo yeFIFA malunga noku, Gcina umohluko wokuba kwimowudi ye-Master League kuya kufuneka silawule iqela ukusuka ekuqaleni ukuya kuthi ga esiphelweni sayo, inkwenkwezi encinci iya kwenza umohluko.
Kuya kufuneka sinike iintetho kunye noMlawuli wezoBugcisa kunye nokushicilela iinkomfa ngaphambi kwemidlalo ebalulekileyo. Izigqibo ezikhuthazwa ngamaphephandaba okanye abanye abasebenzi zingenza umohluko. Imakethi yotshintsho iphuculwe ngokuhamba kohlaziyo, kuba ii-editions zokuqala zinike ukhetho olungenakulindeleka. Le yenye yezona ndlela zokuzonwabisa zingaxhunyiwe kwi-intanethi ezikhoyo kwimidlalo yevidiyo yebhola ekhatywayo.
Ngokwenxalenye yayo, imowudi MyClub uthathe isigqibo sokuhlala engatshintshi, ukusebenzisana kwi-intanethi ukuya kuthi ga kwisithathu ngokuchasene nesithathu, imidlalo engacwangciswanga kunye neetumente eziqhubekayo ze-Intanethi. Amagqabantshintshi oMhla woMdlalo, Ngomdlalo ngamnye obalulekileyo (njengoko kwenzekile ngeAtlético -Real Madrid), kangangeeyure ezimbalwa unokuba yinxalenye yelinye lala maqela mabini kwaye ufumane amanqaku kuwo kukhuphiswano lwexesha lokwenyani. Kwinqanaba lokuchaza, UCarlos Martínez noJulio Maldonado (Maldini) basadlala ngamajuba, bebuyela umva kwaye abanamandla kangako, ngokokubona kwam owona mdlalo ungalunganga.
Ukubheja okucacileyo ngekamva
Umahluko phakathi kweFIFA nePES wawungekho mncinci kangangexesha elide, Ngowona mdlalo wokwenyani kwaye usondele kwimidlalo yebhola ekhatywayo, igcina isiseko esikhazimlisiweyo seminyaka edlulileyo ngaphandle kwemiba yokuphucula abafana noonozinti kwimigama emifutshane. Nangona kunjalo, olona tshintsho luphambili ekufuneka lwenziwe nguKonami kukwinqanaba leendlela zemidlalo. Ungathenga i-eFootball PES 2020 ngexabiso ngeyona ndawo yentengiso, okanye kwi LE LINK.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Ikhaya » Videogames » I-PES eFootball 2020, ukulungiswa okube kuhle kakhulu
Cima iividiyo zika-YouTube kunye namajelo angakungeni kolu lwandiso